19. oktober 2020 - NorSom News
Home 2020 Oct 19
Nooc cusub oo Corona ah oo Trondheim lagu arkay.
Norsomnews - 19. oktober 2020 0
Sida uu sheegay dhakhtarka guud ee degmada Trondheim, waxaa markii ugu horeysay magaalada Trondheim laga helay nooc cusub oo xanuunka Corona ah, kaas oo...
Golaha islaamka oo iska fogeeyay falkii lagu gawracay macalinka.
Golaha ay ku mideysanyihiin masaajidada iyo ururada muslimiinta ah ee Norway(Islamisk råd), ayaa war ay soo saareen ku sheegay inay iska fogeynayaan, ayna...
Baasabooradii cusbaa oo ugu danbeyn bixintooda la bilaabay.
Waxaa ugu danbeyn soo baxay oo bixintooda la bilaabay nooca cusub ee baasaboorka Norway, kaas oo marar badan uu ku yimid dib u dhac,...
Dowlada: Ajaaniibta hala siiyo aqoonta u qalanta tii ay wadankoodii kala imaadeen.
Wasaaradda waxbarashada iyo isdhexgalka ayaa isbuucii tagay baarlamaanka Norway horgeysay sharci cusub oo la xiriira barnaamijka soo dhaweynta, dhexgalinta bulshada iyo kor u qaadista...